Hambalyo isagoo brand phone cusub Android! Dhab ahaantii, tani ma aha Salaan cusub oo qof, kuwaas oo iibsaday phone cusub tan iyo tiknoolajiyada si degdeg ah la beddelo. Sida aad arki karto, soo saarayaasha weyn ee warshadaha sii daayo daydo cusub sannad kasta, kuwaas oo koobaya farqiga u beddelo qalabka. Dadka qaarkood, samaynta telefoon cusub waa mid xiiso leh. Laakiin Haddii aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan qaar ka mid ah xog muhiim ah ka phone jir ZTE, taasi waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah hawlaha ugu adag.
Back ka dibna, waxaa jira siyaabo caadi ah oo aad sameyn karto si ay u gudbiyaan xogta. Kale oo ka Bluetooth ah, dad badan oo isku dayday isticmaalaya Android Ray si ay u gudbiyaan xogta. Iyadoo Android Ray, waxaad ku sawiro, bogagga internetka, xogta, iyo videos wareejin karaa telefoonka jir in aad telefoon cusub, oo la isu keeno qalabka marka Android Ray waxaa gagadin. Marka loo eego Bluetooth, Android Ray waxaa la doorbiday tan iyo markii ay ku wareejin karaa xogta waaweyn. Waxa kale oo la sheegay in ay kala iibsiga Bluetooth xambaarsan ka liidato, oo waa qatar ah iyo jeer.
Siyaabaha kala iibsiga xogta Isticmaalka Android Ray
• Hubi Support NFC
Hubi in labada qalabka taageeraya NFC. Si loo hubiyo, u tag screen Settings, in ka badan ka jaftaa, oo bal arag hoos Wireless & shabakadaha. Haddii aadan arkin calaamadda NFC, waxay ka dhigan tahay hardware lahayn ama taageero lagu helo. Tani waa caadi ah u versions jir ah, ama dhufto ee ma ay taageerayaan Android. Wixii macluumaad dheeraad ah, NFC ayaa waxaa dhawaan soo saaray.
• Fur Data aad rabto in aad la wadaag
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay maraan xogta aad rabto inaad la wadaagto. Dadka intooda badan waxay kaarka SD, si loo helo xogta, laakiin markii aad hore u bedelay goobta, isku day inaad baadi files ee meel gaar ah. Close in NFC, isku day in aad calaamadee sanduuqa si ay awood sarrifka xogta sida aad telefoon taabto qalab kale.
• Touch Android Ray
• Slide biiro in On ama Off
Marka la xidhiidha NFC xoogaystaa, waa in aad maqashaan codka ah. Markaas shaashadda, aad arki doonaa Touch in dogob. Taaban ka muuqan kale ee shaashadda.
Ridey: Wixii xog kala iibsiga in ay ka shaqeeyaan, labada hindisana waa in ay taageeraan oo ay leeyihiin Near Field Isgaarsiinta - si NFC helitaanka waa la ridey ugu horeysay. Ridey xigta waa meesha uu chips '. In kastoo ay jiraan tilmaamo badan oo laga heli karo internetka, waxaad weli si aad u ogaato iyo 2 chips wada saaray. Sida laga soo xigtay forums iyo cilmi baarista, tani waa qaybta ugu cabsi. Si looga hortago dhibka nolosha, isku day in aad doorato aalad xirfad dheeraad ah si loo tashiilo waqtiga iyo waxqabadka. Wondershare MobileTrans waa doorashada ugu fiican marka ay timaado xogta ka ZTE gudbaayo Android Phone.
Xal wanaagsan: 1 click in xogta laga ZTE wareejiyo qalabka kale ee Android
Wondershare MobileTrans waa aalad in uu yahay awood si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya qalabka Android, iyo madallo kale. Waxaa si fudud u wareejin karaan farriimaha qoraalka ah, xiriirada, abuse wac, sawiro, barnaamijyadooda, muusig iyo cajallado fiidyow iyadoo hal click.
Xogta Transfer ka ZTE qalabka Android Isticmaalka Wondershare MobileTrans
ZTE taageertaa Android, sidaa daraadeed waxa loo gudbin karaa iyadoo la isticmaalayo mabda'a Android inay Android. Isticmaalka Wondershare MobileTrans si ay u gudbiyaan xogta waa si dhakhso ah oo ka kaaftoomi-free. Waxaad u baahan tahay oo kaliya cable shaqeysa USB, computer, telefoonka ZTE, iyo Android Phone cusub.
Tallaabo 1: Ku rakib qalab Transfer Android Data
On your computer, rakibi iyo bilaabo Wondershare MobileTrans . Suuqa ayaa aasaasiga ah waa in u muuqdaan sida muunad hoose. Haddii aad samaysay, riix Start .
Talaabada 2: Isku ZTE si ay Android Phone si aad Computer
Connect labadaba ZTE si ay Android inay computer isla isticmaalaya fiilooyinka USB. Wondershare MobileTrans waa in isla markiiba la ogaado, oo mar la ogaado, si loo hubiyo in labada Source iyo meel loo ahaadana iyadaa ku jirnaa boos ku habboon. Haddii aan, riix Flip button in ay is dhaafsadaan.
Talaabada 3: Transfering xogta ka ZTE si ay Android Phone
Ka dib hubinta xog ama waxyaabaha aad rabto in aad wareejiso, riix Start Copy . Waxaa ka dhex muuqan doonaa suuqa kala pop-up. Marka sameeyo, riix OK .
Haddii aad iibsatay Android Phone cusub, iyo waxa ay qorsheyneysaa in ay iska iibiso, ku deeqdo ama aad telefoonka ZTE, ha iloobin in aad badbaadin iyo wareejiyo waxa aad bilowday. Inkasta oo ay jiraan habab kale si ay u gudbiyaan xogta, sababta ma doorato, habka ugu fudud ee ugu ammaanka badan oo ugu hufan si ay u gudbiyaan xogta? Thanks to this cusub Wondershare MobileTrans technology loogu caawiyo dadka isticmaala si ay u gudbiyaan xogta ka phone ZTE si ay Android Phone si fudud. Waa maxay u xiiso badan waa in, kuu soo gudbin karaa macluumaadka u dhexeeya qalabka kaas oo ay leeyihiin dhufto ee gebi ahaan kala duwan, sida iPhone ee macruufka, Nokia ee Symbian, iyo Samsung ee Android.
In da'da xogta mobile, casriga ah waxaa loo isticmaalaa in la akhriyo articles, goobaha dhirtuba, daawado filimada, badbaadin photos, ciyaaro kulan, iyo muusiko dhegayso. Horumarinta ee technology ayaa jidka u bannaysay ee ay hindiseen si ay u gudbiyaan xogta. Iyada oo Wondershare MobileTrans , waxaad si fudud u awoodi karaa inuu wareejiyo videos, liiska, sawiro, fariimaha, abuse call iyo playlists jecel dhexeeya telefoonka ZTE iyo Android Phone. Taas ayaa ka dhigaysa xogta aad ammaan, iyo nolosha sahli. Haddii aad hadda uun aad ZTE Phone in Android Phone bedelay, badbaadin xogta aad u qaali ah adigoo raacaya talaabooyinka aan kor ku.
Poll: Waa kuwee ZTE qalabka ayaad isticmaashaa?
Kuwaasu waa liiska toban qalabka ZTE sare ee USA
• ZTE Blades qod6 Plus
• ZTE Blades qod6 Lux
• ZTE Blades qod6
• ZTE Blades L3
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga ZTE si ay Android